चर्को ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलन : नियामकको विफलता कि निष्क्रियता | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण चर्को ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलन : नियामकको विफलता कि निष्क्रियता
on: February 10, 2019 लेख | दृष्टिकोण
बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको समस्या र बजारमा देखिने ब्याजदरको विकृति नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रको दीर्घरोग बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलताको व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र ब्याजदरको रोड वा अनिवार्य नगद मौज्दातका लागि विभिन्न औजारको व्यवस्था गरेको छ । तर, नियमनका सन्दर्भमा औजार वा सूत्रहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन । यसका कारण बजार ब्याजदरको नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन । बैंकरहरू बीचको भद्रसहमतिका आधारमा ब्याजदरको मार्ग निर्धारण गर्ने परिपाटी आपैmमा गलत हो । त्यो भद्रसहमतिमा फेरि १ दिन पनि नटिक्ने बैकरहरूको क्रियाकलाप असफल वित्तीय नीतिको परिणाम हो । विश्वभरको अभ्यासमा बजारको ब्याजदरका लागि केन्द्रीय बैंकको भूमिका हस्तक्षेपकारी हुनु अनर्थ मानिँदैन ।
ब्याजदरको विषमा समेत देशभर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रने परिस्थिति अनौठो हो । बचतको ब्याजदरमा सहमति कायम गरी एकल अंकमा पुग्दा समेत ऋणको ब्याजदर जहाँको तहीँ देखिन्छ । यो एक किसिमको नियमनकारी निकायमाथि बैंकरहरूको दबाब हाबी भएको परिस्थिति पनि हो । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर स्प्रेड दरमा समेत बैंकहरूको मनोमानी चलेको हुन सक्छ । अन्यथा निक्षेपमा ओरालो लागेको ब्याजले कर्जाको दरलाई नसमेट्ने अवस्था आफैमा शंकास्पद छ । स्प्रेड दरको अवस्था सधैं उच्च बनाउन खोज्नु बैंकरहरूको रुचि हो । तर, खुलाबजारको आडमा नियमनकर्ताको समेत आँखा छलेर बजारको ब्याजलाई आफै नियन्त्रण गर्ने दुस्साहस बैंकरहरूको पनि मूर्खता हो । त्यो किसिमको अभ्यासले कुनै दिन आफैलाई डस्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ ।
अहिले मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिदर, समृद्धि वा विकासको तीव्र अपेक्षामा छ । तर, अर्थतन्त्रका धेरै तथ्यांक अपेक्षा अनुरूप देखिएका छैनन् । मुद्रास्फीति वा उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदरको शर्त स्थिर विन्दुमा हुनुपर्छ । त्यसको अतिरिक्त वित्तीय क्षेत्रले न्यूनतम स्प्रेडमा काम गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । बैंकहरू उच्च ब्याजदरमा सीमित लगानीकर्ताका लागि होइन, प्रतिस्पर्धी भई फराकिलो दायरामा पुग्नु आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ बैंकहरू पनि बलियो र नाफामुखी हुनु आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि गुणात्मक ब्याज होइन, फराकिलो बजारको दायरामा पुग्नुपर्छ ।
प्रायः सबै आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदरको रोडम्याप वा स्प्रेडका विषयमा धेरै महŒव दिने गरेको छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दाको १ महीनाको समय र बाँकी ११ महीनाको बजारको अवस्थामा व्यापक फरक हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र सरकारको बजेट खर्च हुने पद्धतिले वर्षको एकपटक बजारमा तरलता अत्यधिक देखिने परिस्थिति बन्छ । तसर्थ मौद्रिक नीतिमा अधिक तरलताको दोहोरिने र हतारमा सोही अनुरूपका नीतिगत व्यवस्थामा बढी जोड दिने परम्परा छ । बिस्तारै तरलताको अभाव चुलिँदै जाँदा ब्याजदर र स्प्रेडमा विकृतिका संकेतहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको ब्याजरदरको माथिल्लो सीमा र तल्लो सीमालाई मात्र ख्याल गरेर कोरिडोरको प्रस्ताव गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ । औपचारिक क्षेत्रभन्दा बाहिरको कारोबारलाई समेत नियन्त्रण राख्ने ध्येयले स्प्रेड दरको निर्धारणका लागि गहिरो अध्ययन हुन बाँकी देखिन्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रीय बैंकको भूमिका सधैं गोलमटोल देखिन्छ । कहिले लगानी बढाउ भन्नेदेखि कहिले ब्याजदर यो गर वा त्यो गर भन्ने किसिमको वक्तव्यबाजीमा केन्द्रीय बैंक उत्रने गरेको छ । यो लाजमर्दो अवस्था हो ।
ब्याजदर निजीक्षेत्र अनुकूल नबन्नु र केन्द्रीय बैंकको समेत आन्दोलनले मात्र चेतना जाग्नुले त्यसको असर सरकारप्रतिको नीतिक्षेत्रको विश्वसनीयतामा पुगेर अडेको हुन्छ । राष्ट्र बैंक वा उसको भूमिका शंकास्पद देखिनु सरकारको समेत लाचारी हो । निजीक्षेत्रप्रति सरकारको उदासीनताले गर्दा मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप हतोत्साही हुनु नौलो कुरा होइन ।
ब्याजदर व्यवसायमैत्री नहुनुले सधैं तरलताको रटान दिने परिपाटी भित्रिएको छ । साथै तरलता सधैंको समस्या बनेको छ । तरलताको अन्तरसम्बन्ध अर्थतन्त्रका सबै आयामहरूसँग रहन्छ । सरकारको कमजोर बजेट खर्च प्रणालीदेखि समग्र अर्थतन्त्रको संरचना पनि तरलताको व्यवस्थापनका लागि प्रतिकूल छ । तरलताको व्यवस्थापनका लागि निश्चित आकारसम्मको अनौपचारिक क्रियाकलाप पनि मान्य हुन्छ भन्ने प्रकारको आशय नियमनकारी निकायको हो भने त्यो ठूलो मूर्खता हो । सम्भवतः नेपालमा ब्याजदरको विकृतिका लागि समेत आन्दोलन गर्ने अवस्था आउनु विश्वभरको पहिलो उदाहरण हुन सक्छ । यो प्रकारको अवस्थालाई टुलुटुलु हेर्ने र ब्याजदर निर्देशित घेरामा छ भन्ने प्रकारको मनसाय गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो ।
नेपालका बैंकहरू नयाँ जन्जालमा फसेका छन् । सीमित तरलताको उपयोगले असीमित मुनाफा कमाउने होडबाजी बढेको छ । सञ्चालकहरूको घेराबन्दीमा परेर अत्यधिक मुनाफा दिनुपर्ने बिथ्थाको टेन्सन उनीहरूले बोकेका छन् । तसर्थ उनीहरू लगानीका लागि आक्रमक बन्न समेत छाडेर ब्याजदरमा मात्र आँखा गाडिरहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले समयमा त्यो किसिमको नियतलाई नियन्त्रण गर्न नसकेकाले समस्या जटिल बनेको हो । एकातिर बैंकले लगानी नगरी बस्ने तर पुरानो लगानीलाई खेलाइखेलाई दुहुनो गाई दोहिरहने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि केन्द्रीय बैंकले छिटो समाधानको जुक्ति लगाउनुपर्छ । नयाँ कर्जा स्वीकृत नगराउने, बचतको ब्याजमा न्यून हुँदा पनि कर्जामा ब्याज नघटाउने वा भद्रसहमतिका नाममा वित्तीय क्षेत्र नियन्त्रणमा लिने बंैकरहरूको कदम अवैधानिक हो ।
तरलता समस्याका कारणमध्ये बैंकहरू आफैले सृजना गरेको विश्वास वा विश्वसनीयता पनि एक हो । आजको दिनमा समेत अनौपचारिक आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको सञ्जाल व्यापक छ । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो कारोबारलाई समेत बैंकहरू आपैmले प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । कर्जा वर्गीकरणका लागि तथ्यांक तोडमोड गर्ने र बढी ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने कहाँ लगानी गर्ने प्रवृत्ति पनि बैंकभित्र मौलाएको छ । स्रोत खोल्नुपर्ने लगायत कारणले अनौपचारिक स्तरको कारोबारको रकम चाहेर पनि बैंकमा आइपुग्दैन । तसर्थ समग्र नीतिगत व्यवस्थाको पुनरवलोकनका लागि राष्ट्र बैंकको सक्रियता र क्षमतामा प्रश्न उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ ।
अहिलेको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरूले परिस्थिति असामान्य बनेको संकेत गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालको आयातको अंक उच्च पुगेको छ । सन् २००९ मा रू. १८७ अर्ब रहेको भारतसँगको आयात सन् २०१७ मा रू. ६८३ अर्ब पुगेको छ । तर, त्यसको तुलनामा सन् २००९ मा रू.४१ अर्व रहेको भारतसँगको निर्यात व्यापार सन् २०१७ मा रू.४४ अर्बमा सीमित छ । अर्थात् आयातको तुलनामा निर्यात कमजोर रहनु र आयातमा गुणात्मक वृद्धि देखिनु नेपालका लागि चुनौती हो । सर्वसाधारणको बढ्दो विलासिताको खर्चको शोधभर्ना नगदमा भइरहेको कारणले पनि किनबेचको चक्रीय पद्धतिमा ठूलो नगद ब्लक भएको देखिन्छ । तसर्थ विलासिताको आयातका लागि प्रोत्साहन गर्ने बैंकहरूको कारोबारप्रति पनि नियन्त्रण आवश्यक छ । यसले गर्दा वास्तविक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वा ब्याजदर थप विकृतिबाट जोगिने अवस्था रोकिन सक्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली मुद्रा अत्यधिक अवमूल्यनको अवस्थामा छ । मुद्राको अवमूल्यनका कारण समग्र वस्तु, सेवा वा उत्पादन तथा निमार्णको लागत वृद्धि भइरहेको छ । तसर्थ वस्तुको खरीददेखि सबै परियोजनमा परिचालन भएको रकमको हैसियत श्वेत अवमूल्यन हुने कारणले नतीजा प्राप्त गर्न जटिल हुन्छ । यो अवस्थाले पनि मुद्रा वा ब्याजदरको प्रवाहलाई असन्तुलित बनाउँछ । तसर्थ मुद्रा वा ब्याजदरको विषयमा प्रभाव दिनसक्ने क्षेत्र वा कारणहरूको अन्वेषणका लागि सरकारको चासो छिटो र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । तसर्थ तरलताको सन्तुलित प्रवाह र ब्याजमाथिको विकृति हटाउन सरकारले बजेट समयमा खर्च गर्नेदेखि सरकारका विभिन्न कोषको रकम बजारको हस्तक्षेपका लागि प्रयोग गर्न सक्छ । नियामक निकायले बैंकहरूमा भइरहेको असमान निक्षेपको वितरण प्रणाली हटाउनेदेखि संस्थागत समन्वयका लागि समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसले गर्दा भद्रसहमति तोडिने परम्पराको समेत अन्त्य हुनसक्छ । गुणस्तरीय पूँजी र उचित जोखिम व्यवस्थापनका माध्यमबाट सुरक्षित, सबल र प्रतिस्पर्धायुक्त वित्तीय प्रणालीको विकास आजको आवश्यकता हो । बजारको ब्याजदरको विकृति हटाउन होस् वा ब्याजदरको विषयमा व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रने परिस्थिति नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैंकको भूमिका हस्तक्षेपकारी हुनु अनर्थ होइन । बैंकहरूको व्यवसायले पनि सीमित क्षेत्र र चर्को ब्याजदरमा नभई फराकिलो वृद्धिदरको आधार क्षेत्र तय गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
लेखक नेशनल काउन्सिल फर इकोनोमिक एण्ड डेभलपमेन्ट रिसर्च, नाडेक नेपालका निर्देशक हुन् ।
नियन्त्रणमुखी ब्याजदर : जनविश्वासको आधार